Knowledge – Shwe Likes
“ အစ်ကိုကြီး ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ကို မ ဖျက် ဆီးပါဘူး. . .တိတ်တိတ်ေ လး ပေးဆပ်ရတာ ကိုပဲ ကျေနပ်ပါတယ်” ဆိုသူလေးက ပေးတဲ့ ဒုက္ခတွေ
အသ က် ၄၅ လောက် ကလေး ၃ ယောက်အဖေဟာ ရွယ်တူ သူ့မ်ိန်းမကို အသက်ကြီးပြီငြီးငွေ့ ပြီဆိုပြီး ကောင်မလေး ငယ်ငယ်ရှာပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း FB ကနေအသက် ၂၂နှစ် အချောစား မိန်းကလေးတစ်ယောက် နဲ့ချိတ်မိပါတယ် >>> ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
ကျောက်ကပ်ရောဂါ ကြောင့် ခါးနားတာနဲ့ ရိုးရိုး ခါးနာတာ ဘယ်လို ခွဲခြားမလဲ?
By W KPosted on September 18, 2019
ခါးအောက်ပိုင်း နာနေတာ ကြာပြီ။ ဟာ ဒါဆို ကျောက်ကပ်ဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ စကားလေးတွေ ကြားဖူးကြမှာပါ။ ဒါက မှားနေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျောက်ကပ်ပြဿနာ ရဲ့ လက္ခဏာတွေထဲမှာ ခါးနာတာ ပါတတ်ပေမယ့် အခြား ကျောက်ကပ်မဟုတ်ဘဲ ခါးကိုယ်တိုင် >>> ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
” ကုန်းဘောင်ခေတ် နောက်ဆုံး ဘုရင် သီပေါမင်းရဲ့ မြေးတော်တွေ.. ဘာဖြစ်သွားခဲ့သလဲ…? “
By W KPosted on September 17, 2019
ကုန်းဘောင်ခေတ်နောက်ဆုံး ဘုရင် သီပေါမင်းရဲ့ မြေးတော်တွေ.. ဘာဖြစ်သွားခဲ့သလဲ.. အ ခု တလော ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာ သီပေါမင်းနဲ့နန်းမတော်စုဘုရားလတ်တို့ရဲ့ သမီးတော်လေးပါး ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ ပတ်သတ် လို့ မှားယွင်းစွာ ဖော်ပြပြောဆိုနေကြတာတွေ တွေ့နေရ လို့ ဒီPostကို >>> ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
ကျမ်းကျိန် မှ ကျမ်း စူးတာ လား (တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ တဦး၏ ကိုယ်တွေ့ အတွေ့အကြုံများ)
By W KPosted on September 16, 2019
တ ရား သူကြီးေ တွ တရားခွင်မှာ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆို ဖို့ အမျိုးသား လွှတ်တော်မှာ အတည်ပြုတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကျမ်းကျိန်ခြင်း၊ ကျမ်းမကျိန်ခြင်း နဲ ပတ်သတ်ပြီး ဥပဒေ ပညာရှင် အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ငြင်းကြ >>> ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
မျက်မှန်ကင်းဝေး ဆံပင်နက်ေ မှာင် ကင်ဆာ လဲပျောက် B ပိုး C ပိုးပျောက်ကင်းတဲ့ အောင်မဲညို
အမှတ်တမဲ့ စူပါဂလူး ကပ်သွားမိရင် ဘယ်လိုပြန်ခွာရမလဲ ဖြေရှင်းနည်း ( ဗီဒီယိုဖိုင် )
By ShwePosted on September 16, 2019 September 16, 2019
စူပါကလူး အကြောင်းကိုတော့ ပရိသတ်တွေ သိကြမှာပါ။ လက်မှာ မတော်လို့များ ကပ်သွားရင် ခွာရအခက်၊ ပူစပ်ပူလောင်နဲ့ အသားတွပါ ပဲ့ပါတတ်လို့ ဂရုစိုက်မှ တော်ကာကျတဲ့ အရာပါ။ အခုတစ်ခေါက် ပရိသတ်တွေကို ပြောပြမယ့် နည်းလမ်းလေး က စူပါကလူးလက်မှာ >>> ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
” ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရသော ခြောက်ခြားဖွယ်ရာညများ ..” ( အပိုင်း – ၂ )
By W KPosted on September 14, 2019
” ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရသော ခြောက်ခြားဖွယ်ရာညများ ..” ( အပိုင်း – ၂ ) ” သီတာ ဆိပ်ကမ်း က သရဲခြောက်တဲ့ တိုက်ပျက်ကြီးတွေ ” မအိပ်ကြသေးရင် ဖတ်ကြ ၊ ဒီနေ့က >>> ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
သင့် ခန္ဓာကိုယ်ပေါ် က မှဲ့တွေက ပြောပြနေတဲ့ သင့် အကြောင်း
By ShwePosted on September 14, 2019
မှဲ့လေးတွေဟာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ မှာ ရှိနေတတ် ပါတယ်။ ဒီမှည့်လေးတွေက သင့်ရဲ့ အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တကယ်မှန်လား မမှန်လား ဆိုတာကတော့ ခုဖော်ပြပေးမယ့် အရာလေးတွေ နဲ့ တိုက်ကြည့် လိုက်ပါဦး။ (၁) လက်ဖဝါးပေါ်ကမှဲ့ >>> ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်